पर्सनालिटी भएको केटा मन पर्छ : करिष्मा ढकाल - Kanchanjangha Online
आज: १४ जेष्ठ २०७७, बुधबार | Wed, 27, May, 2020
काउली बुढीको अभिनयमा तिज गीत ’बैना रुमाल ’ भिडियो सहित
कञ्चनजंघा अनलाईन १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार १२:२८ मा प्रकाशित ( २ साल अघि) १२ पाठक संख्या
काठमान्डौँ , फागुन १६ । ‘बाग्लुङ बजार’पञ्चेवाजा गित बाट नेपाली गितको मोडलिङमा डेब्यू गरेकी हुन मोडल करिष्मा ढकालले । पहिलो म्युजिक भिडियोबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएकी करिष्माले दोश्रो गित सेल्फी हानौला गितबाट स्थापित भएपछि उनि निकै विश्वस्त छिन् । दर्शक तथा निर्देशक तथा अग्रज कलाकारको नजरमा राम्रो अभिनय प्रस्तुत गरेकी उनले अटोग्राफ मागेको र केहीले आफूलाई मन पराएको मा उनी निकै खुशी छिन । उनी कलाकार करिष्मा ढकाल सगँ सहकर्मि साथी रोशन पोखरेलले गरेको कुराकानीको एक अंश
करिष्मा जि तपाई यस क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
सानै उमेर देखी गित संगित क्षेत्रमा मेरो रुचि थियो । बाल्यकालमा देखी नै नित्य तर्फ मेरो विशेष रुचि रहेको थियो । विद्यालयमा आयोजना गरिने अतिरिक्त क्रियाकलापका साथै विभिन्न साँगितिक कार्यक्रममा जादाँ आफुपनि यसरी नै आम मानिसको माझँमा आफुले देखाउन पाए हुने थियो लाग्यो यसै क्रममा करिव २ वर्ष अगाडि एउटा पञ्चेवाजामा आधारित भिडियो बाग्लुङ बजारमा अभिनय गर्ने अवसर आयो यहि बाट मैले आफनो मोडलिङ यात्रा शुरु गरे ।
हाल सम्म धेरै म्युजिक भिडियोमा खेली सक्नुभयो थप केही रोचक कुरा ?
धेरै वटा रोचक कुराहरु रहेको छ , जस मध्ये मलाई पहिलो पटक म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्दाको अनुभव भन्दै छु हजुरहरुलाई पहिलो पल्ट क्यामेरामा काम गर्दा निकै अफ्टयारो भएको थियो , जुन कुरा आजको दिन सम्मपनि सम्झन्छु ।
कहिले बाट अभिनय थाल्नुभयो ?
मैलै एस एल सी पछि बाट हाल सम्म विभिन्न म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेको छु । विगत ३० महिना देखी यस क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेको छु ।
मोडलिङ गर्दै हुनुहुन्छ फिल्म खेल्न अफर आयो भने के गर्नुहुन्छ ?
हा हा हा –हासो ) फिल्मका लागी योग्य भैसकेको छु जस्तो लाग्दैन अझै धेरै कुरा मैैले सिक्न बाकिँ छ यस क्षेत्रमा मैले । अभिनय भनेको लाखौँकरोडौँसम्म पुग्ने कुरा हो । मानिसले यसमा सानो–सानो कुरामा पनि जज गर्छन् । राम्रो गरेको नगरेको तुरुन्तै थाहा हुन्छ । फिल्ममा बोली, एक्सन, रियाक्सन सब चीजमा पर्फेक्ट हुनुपर्छ ।जस्तो लाग्छ मलाई ।
कहिलेदेखि मोडल बन्छु भन्ने सोच आएको थियो ?
मोडल बन्छु भन्ने त मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ । तर, मलाई नशा चाहिँ रहेछ भन्ने बल्ल ठम्याउँदैछु । म गित बज्ने वितिकै ममा एक किसिमको आनन्द लाग्ने गर्दथियो ।सानोमा गितमा देखाए जस्तै नक्कल गर्ने जस्तो की। सल च्यापेर लजाएजस्तो गर्ने, हाँस्ने, रुने सबै गर्थें जे गितहरुमा गर्थे । तर, मेरा सबै गतिविधिको साक्षी ऐना मात्र हुन्थ्यो । म अनि परिवारले मलाई कहिलै अलाउ गर्नुहुन्थ्यो जस्तो पनि लागेको थिएन ।
भनेपछि अहिले चाहिँ परिवारका सवैजना करिष्माको सपोर्ट छ ?
एकदमै । अहिले त मैलेभन्दा पनि मेरो प्रमोट मामुले ज्यादा गर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ कसैलाई चिनाउनुपर्यो भने ‘यो मेरी हिरोइन छोरी’ भनेर भन्नुहुन्छ । मलाई थाहा छ मैले त्यत्रो ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन, बाँकी नै छ तर यसमा पनि बाबाले गर्व गरेको देख्दा असाध्यै खुशी लाग्छ ।
करिष्माको कोही ड्रिम ब्वाई त होला नि ?
अफकोर्स छ । मलाई पहिलो नम्बरमा पर्सनालिटी भएको केटा मन पर्छ । हेर्दा नै एक खालको एटिच्युड देखिनुपर्यो । अर्काे मलाई श्रीमतीको चम्चागिरी गर्ने केटा मन पर्दैन । श्रीमतीलाई ड्रप गर्ने, पिकअप गर्ने, बेलुका सधैँ तरकारी बोकेर घर फर्कने, भान्सामा लुसुलुस छिर्ने यस्तो खालको केटा मन पर्दैन ।
केटाको मामलामा करिष्माको सोच राम्रो रैछ ? के चाँडै विवाह गर्ने संकेत हो यो ?
एक्चुअल्ली मलाई त चाँडै विवाह गर्न मन छैन कहाँ अझै मैले धेरै कुराको योगदान नेपाली संगितको क्षेत्रमा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
नयाँ प्रोजेक्ट के गर्दै हुनुहुन्छ ?
तत्काल धेरै ओटा म्युजिक भिडियो छायाँकनको क्रममा रहेका छन त्यहीलाई निरन्तता दिने सोचमा रहेको छु ।
कला क्षमता प्रदर्शन गरेर सिने क्षेत्रमा स्थापित हुन्छु – मोडल सिर्जना थापा
जिवनको अन्तिम अवस्था सम्म पनि रंगकर्ममै रहन्छुः शंकर अधिकारी घायल
गायनमा सक्रिय बन्दै गायिकाः नित्याशिवा
अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्ट “गोर्खा वारियर” को टेस्ट टिजर सार्वजनिक
१३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०६:४९
१३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०६:३०
माछा मार्न गएका अमृत थापामगर भेटीए ४५ दीन पछि यस्तो अबस्थामा
छथरका किसानहरु फौजी किराको आतंकले हैरान
१२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०९:१२
कालो छिद्र (ब्लाक होल) भनेको के हो ? यसले कसरी असर गर्दछ ।
लिम्बू खजुमहरुको माङ्गेन्ना यक: संरक्षणमा युवाहरु जुट्दै
कोरोनाको उपचार छैन, रोकथाम सम्भव छ : यी ३ कुरामा ध्यान दिएमा ९० प्रतिशत रोकथाम हुन्छ
असल श्रीमान श्रीमतीमा हुनुपर्ने चार गुणहरु